A Girl & Three Sweetheart ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel December 23, 2016
- Suki na hito ga iru koto ( Original Title )
2016 ရဲ့နွေရာသီမှာ ထုတ်လွင့်ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးငယ်များကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ... အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးကတော့ Mirei Kiritani ပါ။( Mirei Kiritani ဟာ တောင်ကိုးရီးယားယောက်ျားလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ Winner ထဲက member တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Jin Woo နဲ့အတော်ကလေး တူတဲ့အတွက် Inner Circle (winner fan) တွေကြားမှာလည်း နာမည်ကြီးပါသေးတယ်။) တွဲဖက်မင်းသားကတော့ Mirei နဲ့ Heroine Disqualified. မှာအတွဲညီညီသရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ Kento Yamazaki ပဲဖြစ်ပါတယ် ... သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်ကို နောက်ထပ်မင်းသားချောနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Shohei Miura နဲ့ Shuhei Nomura တို့ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ် ... ဆန်းဆန်းပြားပြားဇာတ်အိမ်မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုစွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းဆိုတာကို အာမခံပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ - တိုကျိုမြို့ကကိတ်မုန့်ဆရာမလေး Misaki ဟာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူ့ရဲ့ဝါသနာနောက်ကိုသာလိုက်နေခဲ့ရလို့ ချစ်သူရည်းစားထားဖို့တောင် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး ... တစ်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲ ကျောင်းတုန်းက ကြိတ်ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုကြောင့် သူနဲ့အတူနေရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ် ... သူသဘောကျခဲ့တဲ့ ချစ်သူဟာ လက်ရှိမှာစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေတာပါ ... သူမကိုအဲ့ဒီ စားသောက်ဆိုင်အတွက် ကိတ်မုန့်ဆရာအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ တွေဝေမှုတွေကြားထဲက သူမရဲ့ကွက်လပ်လေးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်တစ်စွန်းတစ်စလေးနဲ့ လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ် ... တကယ်တမ်းသူမ ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ သူမထင်ခဲ့သလို သူတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပဲ သူရဲ့ချစ်လှစွာသော ညီငယ်နှစ်ယောက်နဲ့ပါ တစ်အိမ်ထဲ နေရတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလည်းသိရအောင် အခုပဲဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်လေ ...
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Kento Yamazaki ကို မိတ်ကပ်မလိမ်း အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ ... သူ့ဇာတ်လမ်းအားလုံးထဲမှာ ဒီဇာတ်ရုပ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ... အရမ်းကို သဘာဝကျကျ ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ် ...
IMDb 7.8 ရရှိထားတဲ့ ဒီနွေရာသီအချစ်ဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီး လာမယ့်နွေရာသီအတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန်ကြရအောင်လား ...
Translator - May Moe Kyoe ( May Corn)
Labels: Comedy Drama Japan Romance
wave light December 25, 2016 at 9:01 AM
Khine Thazin December 26, 2016 at 10:07 PM
Su Su Myat December 27, 2016 at 10:50 PM
အရမျးမိုကျတဲ့ ဇာတျလမျးလေးကို ဘာသာပွနျပေးတှကျ အတှကျ ကြေးဇူးပါ ခေးတို့ရလျ
Translate အတှကျ ကြေးဇူးပါ ။။။ :* luv u guy
Hein Sett December 28, 2016 at 6:54 AM
wave light December 28, 2016 at 9:18 AM
wave light January 6, 2017 at 10:54 AM
Thandar Win January 8, 2017 at 8:32 PM
Thida Swe January 10, 2017 at 1:05 AM
Thandar Win January 10, 2017 at 7:41 PM
ထပ်တင်ပေးပါဦး. Thank you so much Admins.
Hein Sett January 12, 2017 at 5:30 AM
Khine Thazin January 12, 2017 at 5:53 PM
Thida Swe January 16, 2017 at 8:27 PM
wave light January 17, 2017 at 5:20 PM
admin တို့ရယ် ထပ်တင်ပေးပါဦးနော်4ပိုင်းပဲကျန်တော့တာ plz
Thandar Win January 19, 2017 at 12:41 AM
Thandar Win February 5, 2017 at 1:08 AM
admin တို့ရယ် ထပ်တင်ပေးပါဦးနော် please. Thank you.
myatmin thu February 11, 2017 at 1:55 AM
Adminတို့ရေ ဒီဂျပန်ကားအဆက်လေး တင်ပေးပါအုံးဗျ
myatmin thu February 12, 2017 at 6:34 PM
htike yin aung March 30, 2017 at 1:56 AM
Thandar Win April 19, 2017 at 8:32 AM
ဆက်မတင်ပေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချထားကြသလားဟင် 😢